သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို SADiE ယူရန်သေချာပါစေ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သင်က Going နေလေရာရာ၌, သေချာတာပေါ့ကိုသင် SADiE ကိုယူ Make
2015 NYF ရေဒီယိုအစီအစဉ် & မြှင့်တင်ရေးဆုပေးပွဲ, နယူးယောက်,6/ 22 / 2015
အဘယ်မှာသင်က Going ပါသလား? ခေါင်းစဉ်တစ်နာရီကြာရေဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် New York မှာမကြာသေးမီကရာအရပျကိုယူသော 2015 နယူးယောက်ပွဲတော်များကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအစီအစဉ်များ Gala ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာသတင်းထောက်များနှင့်တင်ဆက်သူကက်သရင်း Carr ကတစ်ဦးရွှေဆုကိုရရှိထားပြီးပါပြီ။
သင်က Going နေအဘယ်မှာရှိ BBC World Service များအတွက် Loftus Media ကထုတ်လုပ်? Loftus မီဒီယာဒါရိုက်တာဂျိုအန်း Coombes အားဖြင့်ကြံစည်ခဲ့သည်။ များစွာသောလူလိုပဲ, သူမဟာမကြာခဏသူချင်းခရီးသွားများအတွက်သွားခဲ့ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ရဲ့ခရီးကားမောင်းခဲ့သည်ရှိရာအံ့ဩခဲ့သလဲ ရိုးရှင်းတဲ့ရဝုဏ်ထဲကနေသင်က Going နေအဘယ်မှာရှိ၏အယူအဆ? မွေးဖွားခဲ့သည်။
ကက်သရင်း Carr ကရဲ့အင်တာဗျူးတွေကမ္ဘာအနှံ့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောခရီးအောင်, လူများစွာ၏ဘဝအသက်တာ၌တနေ့၏သင်တန်းဇယားတစ်ခု Vox Pop ဂီတ၏ပုံစံကိုယူပါ။ Peterborough အတွက်စတင်ကာ Carr ကခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏ခရီးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုနားထောင်စေသောဘဝပုံပြင်များနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖေါ်ရာတွင်ဤထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုဖမ်းယူဖို့အဖြစ်ဝေးအနောက်အာဖရိကအဖြစ်သွားရောက်ကာ။ အဆိုပါပုံပြင်များတစ်ဝမ်းကွဲရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဘို့အဆီနီဂေါမှကိုပင်ဟေဂင်ကနေခရီးသွားလာလူမျိုး၏အုပ်စုတစုမှတဆင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးမြေးဖြည့်ဆည်းရန်သူ၏လမ်းအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးမီကမုဆိုးမယောက်ျားသည်အထိ Carr ကရင်ဆိုင်ခရီးသည်ကဲ့သို့အများအပြားနှင့်မတူညီဖြစ်ကြသည်။
ယင်းအစီအစဉ်အတွက်ပစ္စည်းကိုဖမ်းယူဖို့, Carr ကတစ်ဦးအလင်း-အလေးချိန် Roland R-26 ခရီးဆောင်အသံဖမ်းခြင်းနှင့်သီးခြားမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူသွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက်သူမ၏လက်ပ်တော့ပေါ်သို့အသံလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများဖြတ်တည်းဖြတ်ရန် Prism ကိုအသံရဲ့ SADiE6software ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
"SADiE6၏ဂုဏ်အသရေငါဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "တယောက်ကိုတယောက်ကွန်ပျူတာကနေပြောင်းရွှေ့ခံရနိုငျသော dongle ပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲထားရှိခြင်းသည်ငါပွုလုပျ၏ကြင်နာဘို့စုံလင်သည်။ ငါသည်ငါ့ကနဦးတည်းဖြတ်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, ငါရိုးရှင်းစွာအသံအဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်သို့ကြောင့် load ဘယ်မှာ Loftus မီဒီယာသို့ငါ၏အ SADiE6dongle ယူ. နောက်ဆုံးရောနှောဖန်တီးပါ။ ဒါဟာတကယ်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ "
သူမလန်ဒန်မြို့ရှိဘီဘီစီရေဒီယို4မှာအလုပ်လုပ်သောအခါ Carr ကပထမဦးဆုံး SADiE နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ SADiE ရှည်လျား Salford အတွက်ဘီဘီစီမြောက်အမေရိကမှာ 50 SADiE6တည်းဖြတ်ရေးစနစ်များအပါအဝင်ဗြိတိန်တစ်ဝှမ်း SADiE တပ်ဆင်အများအပြားရာပေါင်းများစွာသည့်ဘီဘီစီ၏အဓိကဖြစ်ခဲ့သည်။
SADiE6၏အောင်မြင်မှုသော့ချက် High-end ရေဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုက်ညီသောအသံတည်းဖြတ်ရေးနဲ့ productivity ရန်၎င်း၏ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ SADiE6software ကိုတစ်ဦး desktop သို့မဟုတ် laptop အပေါ်တစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကိုသာလျှောက်လွှာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်လည်းတစ်ဦးအဆင့်မြှင့်အဖြစ်တည်ဆဲ SADiE5ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ယင်း၏အမြန်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်အဆိုပါ SADiE ထုတ်ကုန်အကွာအဝေး၏တည်းဖြတ်ရေးနှင့်တည်နေရာမှတ်တမ်းတင်စွမ်းရည်, ရေဒီယိုပြဇာတ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလေးပေးတစ်ဦးအမြန် turnaround အပေါ်ရှိရာလိမ်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထိုသို့စံပြပါစေ။
"ငါရေဒီယို4မှာငါကိုသုံးပါကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသောတွေ့ရှိခဲ့ရသောအခါ SADiE အပေါ်တည်းဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ," Carr ကရှင်းပြသည်။ "ကျွန်မအသံအင်ဂျင်နီယာဘူးနဲ့ကျွန်မဆက်ဆက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုနိုင်အောင်ထိုးထွင်းသိမြင်သောကွောငျ့ကြောင့်အရေးမလုပ်ခဲ့။ ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဘီဘီစီကျန်ရစ်သည့်အခါငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်အောင်ငါ SADiE သုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့သညျ။ ဒါဟာအလွန် classy နှင့်ထိရောက်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မပဲမပါဘဲမဖြစ်လိမ့်မယ်တဦးကိုအလုပ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ "
သင်က Going နေအဘယ်မှာရှိ၏အောင်မြင်မှုကို? အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ကြေငြာခဲ့သည်မတိုင်မီပြီးသား Loftus မီဒီယာကနေနောက်ထပ်သုံးအစီအစဉ်များကော်မရှင်နာခဲ့သော BBC World Service, နှစ်သက်သောသိရသည်။ ဤရွေ့ကားချင်းစီ 30 မိနစ်ရှည်လျားတစ်ဖန် Carr ကထိုသူတို့အဘို့ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကမ္ဘာ့အခရီးသွားလာပါလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
"ဟုအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုနယူးယောက်ပွဲတော်မှာရွှေဆုကိုသောအခါငါလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့များနှင့် ပို. ပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလုပ်စုဆောင်းရန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဖြစ်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "ငါက USA မှခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, ငါလာမယ့်အစီအစဉ်အတွက်ခရီးစဉ်တစ် Starting Point သို့စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့တိပ်ရီကော်ဒါကို ယူ. အနည်းငယ်အင်တာဗျူးဖမ်းမိ။ "
လာမည့်အစီအစဉ်များကိုတဦးအတွက်ဂုဏ်သတင်းဆုကိုအင်္ဂါရပ်စုဆောင်းဖို့ခရီးသွားလာ၏အလိုတော် Carr ကရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း? သူမသည်မပြောပါဘူး, ဒါပေမယ့်အပါအဝင်အဘို့လုပ်ရမည်တစ်ဦးအမှုကျိန်းသေရှိပဲ!
1987 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Prism ကိုအသံနိုင်ငံတကာအသံလွှင့်, ရုပ်ရှင်, ဂီတထုတ်လုပ်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂျစ်တယ်အသံပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုမှန်မှန်ထိုကဲ့သို့သော EMI Abbey လမ်း, ဘီဘီစီ, အဖြစ် client များသဖြင့်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်တေးသံစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ Prism ကို ADA-8XR တိကျစွာ 8-ရုပ်သံလိုင်း converter ကိုယူနစ်, ပါဝင်သည် Sony က, Lucasfilm နှင့်ဝေါ့ဒစ္စနေး။ Prism ကိုအသံကိုလည်းက de facto dScope စီးရီး III ကိုအသံ Analyzer system အပါအဝင်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေး, ထုတ်လုပ်တယ်။
BBC World Service ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ကက်သရင်း Carr က ရွှေဆုချီးမြှင့် နယူးယောက်ပွဲတော် Prism ကိုအသံ SADiE SADiE6Software များ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် သင်ဘယ်သွားမလို့လဲ? Loftus မီဒီယာ 2015-06-29
ယခင်: အလုပ်ရှာဖွေရေးနည်းပြ: Pamela Kleibrink Thompson ကအားဖြင့်ဝီလျံရှိတ်စပီးယားကနေဖခငျအကွံဉာဏျ
နောက်တစ်ခု: 2015 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံမှာ Keynote လိပ်စာ Give မှ quantum